Iingcali ezininzi zesondlo ziyakholelwa isobho kwimifuno, kufuneka ekudleni kwemihla ngemihla kunye nesiseko sokutya okunempilo. Ungathini ukuba isuphu ikunceda ukunciphisa umzimba?
Ukutya okuninzi okwahlukeneyo kuphuhlisiwe ngesiseko sesobho esivuthayo, kodwa ukuba ufuna ukunciphisa umzimba ngesuphu evuthayo, ukutya okulandelayo kufuneka kungabandakanywa ekutyeni:
Kakade ke, musa ukulibala malunga nokusebenza komzimba, ongenakwenza ngaphandle kokukhawulezisa inkqubo yokutya emzimbeni.
Ukutya okunjalo kunokuba nomtsalane kwabo bathanda ukutya ngalo lonke ixesha, kuba isuphu inokudliwa kwimilinganiselo engenamda, oko kukuthi, kokukhona utya kakhulu, kokukhona ulahlekelwa kokukhona. Kodwa isuphu evuthayo ayinakutyiwa ngaphezulu kweeveki ezi-2, ke qiniseka ukuthatha ikhefu.
Ngokuya kuphononongo lwabaninzi abalandela ukutya okusekwe kwisuphu yokutshisa amafutha, baphulukana ne-4 ukuya kwi-8 kg ngeveki. Kodwa ukuba awugcini isondlo esifanelekileyo kwixa elizayo, yonke into iza kubuya. Isuphu inemifuno enceda ukulahla ityhefu emzimbeni, ukuyicoca apho, kunye neseleri kunye nejinja zithathwa njengezona zinto ziphambili zokutshisa amafutha.
Kwaye ke, apha ngezantsi kukho iiresiphi ezimbalwa zesuphu evuthayo.
Izithako: 1 itswele eliphakathi, 4 iitumato eziphakathi, 1 intloko encinci yeklabishi, 2 ipepile eluhlaza, 2 iityhubhu zomhluzi wemifuno, ityuwa, isosi eshushu ukuba uyafuna.
Umxholo wekhalori wesuphu kwi-100 yeigram ngu-4 kcal kuphela.
Utamatisi Ukutsha Isuphu Recipe
Izithako: Iitamatisi eziphakathi ezi-3, iigram ezingama-500 zekhaphetshu emhlophe, itswele eli-1 eliphakathi, 1 iminqathe, iigram ezingama-30 zengcambu yeseleri, ii-clove ezi-2 zegalikhi, imifuno kunye nezinongo zokungcamla.
Iklabishi inqatha yokutshisa isobho - iresiphi
Izithako: isiqingatha sentloko yekholifulawa, isiqingatha sentloko yeklabishi emhlophe, 2-3 iminqathe ephakathi, 1 itswele ephakathi, ipepile enye, iziqu ezi-1-6 zeseleri, imifuno kunye namayeza okutya ukungcamla, incindi yesiqingatha selamuni.
Itswele Amanqatha okutsha kwesuphu
Izithako: 6 itswele, 2 iitumato, isiqingatha sentloko yeklabishi emhlophe, 2 intsimbi yepepile, isipha esinye se-celery, isinongo kunye nemifuno yokungcamla.
Ukwakhiwa kweesuphu ezitshisayo kunamafutha kwahlukile, kodwa iisuphu zilungiswa ngendlela efanayo. Sinqumle imifuno ibe ngamaqhekeza, unako encinci, unako phakathi, ngokubanzi, njengoko uthanda kwaye uyigcwalise ngamanzi abandayo.
Yongeza ityuwa nepepile. Yima phezu kobushushu obuphezulu malunga nemizuzu eli-10, emva koko ubushushu obude kude kube yimifuno ithambile. Ezinye iindlela zokupheka zicebisa ukuntywila itswele kunye neetumato kancinci kwioyile yemifuno kwaye emva koko uzifake kwisuphu. Nangona ioyile ingacetyiswa ukunciphisa umzimba.
Ukutya isuphu-ukunciphisa umzimba ngeveki
Uluhlu olusisiseko lokutya kwekalori
Iisuphu ezimnandi nezinempilo ngaphandle kwenyama
Edlulileyo Ukutya kuka-Osama Hamdiy yindlela elungileyo yokunciphisa umzimba
Okulandelayo Ukutya kwaseJapan okungenatyuwa-ukunciphisa umzimba ngokufanelekileyo
Imibuzo ye-58 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,693.